Myanmar Archives - My Notes
March 29, 2015 by Thein Htike Aung on Notes
Zawgyi font for Lollipop
Hope the following way will be worked for all Android Devices.The following successfully done in Galaxy S5, Lollipop. Initial installation of Zawgyi font not supported anymore after upgraded to Lollipop. Zawgyi font for Lollipop
Step 1 – Install iFont
Step2– Install Zawgyi font from iFont Myanmar tab. You can go by tapping on MY circle icon.
Step3– Install Zawgyi One font
Step4– Change Zawgyi One font in phone setting. Settings -> Display -> Font -> Font Style. The following choose the Zawgyi One font. Zawgyi One TTF is the one that previously installed in that phone and it is not supported anymore after upgrade to Lollipop.
Hope it is working for you too. Good Luck.
October 13, 2014 by Thein Htike Aung on Notes
မြန်မာ U19 ပွဲလေး ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆင်ခြင် မိတာလေးပါ။
ကျနော်ဟာ ရူံးနိမ့်မှုကို အင်မတန် ကြောက်တဲ့ကောင်ပါ။ လဲရင် ထိုးနှက်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့လို့လား။ သို့မဟုတ် ကိုကိုယ်တိုင်ပဲ စိတ်ဓာတ်အင်အား ပျော့လို့ပဲလား။ ထားပါတော့၊ ဒီနေ့တော့ မြန်မာ နဲ့ အီရန် ပွဲလေး ကြည့်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာ ဘောလုံးပွဲကို အရင်က ကြည့်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းပွဲတွေ မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကိုယ်က နိုင်မလားကြည့်လိုက်ရင် အဲ့ပွဲ ရုံးတာချည်းပဲ။ XD အဆိုးဆုံးကတော့ Sea Game 2013 မှာရှုံးခဲ့တာပဲ။ မရှုံးသင့်ပဲ ရှုံးခဲ့တာကို။
Myanmar Football Fan Club Page မှ ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
ဒီနေ့ပွဲ ၃ လုံးပြတ်ရှုံးရင်တောင် Quarter Final တက်မှာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း နိုင်စေချင်တယ် ပေါ့လေ အရည်အချင်းရှိရှိ။ အီရန်က အာရှမှာ ပထမအဆင့်ရှိတဲ့ အသင်းဖြစ်ပြီး စကန်ကတည်းက မခေပါဘူး လူကောင်ကလဲ ကြီး၊ ဒီနေ့ပွဲကလဲ ရှုံးလည်းမထူး၊ နိုင်လည်းမထုးဆိုတော့ စိတ်ဓာတ်က ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက်ထားသလိုပါပဲ။ အစွမ်းကုန် သိက္ခာဆည်မယ့် ပွဲပါ။
အဲ့တော့ ဒီနေ့ ကြည့်ရမှာက မြန်မာ အသင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။ အေးဆေးပဲကွာ ဆုိုပြီး ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့ ကန်မလား။ ဒါမှမဟုတ် ပြောနေကြစကားလို ခြင်္သေ့ ချင်း ယှဉ်လဲ ဒီအားပဲ။ ယုန်ဖမ်းလဲ ဒီအားပဲ၊ ဆိုတာမျိုး Pro ကြကြ ကစားမလားဆိုတာပဲ။ မြန်မာ အသင်းဟာ ဒီနေ့ပွဲမှာ Pro ကျကျ ကစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်း အသင်းနဲ့ ကန်ခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်အတိုင်းပါပဲ။
မြန်မာအသင်းက သိပ်အမှားမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အီရန်က အရမ်းကောင်းခဲ့တယ်။ ကစားကွက် ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ ကျနော် စိုးရိမ်သလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ရှုံးမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်ပါပဲ။ အဲ့တာက ဘာနဲ့ ဆက်စပ်သလဲဆို ရှုံးတာနဲ့ ပရိသတ် ဝေဖန်မှု လာတော့မှာပါ။ ကျနော်တို့ အပြောမခံနုိုင်ကြ ပါဘူး။ ဘာလို့ အဲ့လို ထင်လဲဆို ဒုတိယပိုင်း ပထမဂိုး ပေးပြီး နောက်ပိုင်း ကစားသမားတွေ ပြာသွားခဲ့ပါပြီ။ ချေပဂိုးကို ဆာလောက်နေခဲ့ပြီ။ အလျင်စလို ပြုလုပ်နေခဲ့ပြီ။ စိတ်ကို ပုံမှန် အတိုင်းမထိမ်း နုိုင်တော့ပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့် ကစားကွက် မဖော်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။
အဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ် တွေးမိတယ်။ ကျနော် တစ်ခုခု အကျပ်အတည်း ရောက်ရင် ဖြစ်တဲ့ အတုိုင်းပါဘဲ။ ခြေမကိုင်မိ၊ လက်မကိုင်မိ။ ပုံမှန်အတိုင်းဆို ကျနော် ဆက်မကြည့်တော့ပါဘူး ဂိုးပေးလိုက်ရကတည်းက။ စိတ်ဓာတ်ရှုံးတာနဲ့ နောက်ပိုင်း ထပ်ထပ် ခါခါ အမှားများတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ပွဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်လည်စဉ်းစားမိတယ်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင် ရှုံးနိမ့်မှုကို ကြောက်မိနေပြီ။ ဒါနဲ့ သေသေချာချာ စဉ်းစားတယ် ကျနော် ဘာကြောက်စရာလိုလဲ။ ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်နွယ်နေခြင်းလဲ မဟုတ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ဝေဖန်မှု ကြောင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သိတယ်မှတ်လား၊ မင်းတို့ မြန်မာတွေ ဘာပုတယ် ညာပုတယ်လို့။ အမှန်တော့ဗျာ ရိုးရိုးလေး တွေးကြည့်ရင် နှစ်ဖွဲ့ ဘောလုံးကန်တယ်ပေါ့၊ အရှုံး အနုိုင်ထွက်လာတယ်။ အော် ဟုိုအသင်းကကောင်းတယ်။ အင်း ဒီအသင်းက ဒီနေ့ မှားခဲ့တယ့် အမှားလေးတွေ ပြင်လိုက်ရန် ကောင်းလာနိုင်တယ်။ ပြီးပြီပေါ့ဗျာ။ ကျနော်အရင်က Mind Set က ကိုယ့်အသင်းရှုံုးရင် တစ်နိုင်ငံလုံး သူ့ကျွန်ဘ၀ ရောက်ရသလုိုလို။ ကျနော် Mind Set မှားယွင်းနေမှုကို ပြောပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအသင်းဟာ ခြေပျက်ပျက် နဲ့ပဲ2Zero နဲ့ Quarter ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်လဲ အရှုံးထဲက အနိုင်ဖြစ်အောင် ကိုယ့်အဖြစ်အပျက်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဘောလုံးအရှုံးကို သင်ခန်းစာယူခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့ ကျရှုံးမှူရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ဝေဖန်မှုကို ဂရုစိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေ၊ ကိုယ်လုပ်စွမ်းနုိုင်သလောက် ကြိုးစား။ ရှုံးနိမ့်မှူကို နင်းပြီး ရှေ့ဆက်ရပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာ U19 ဟာ ဒီနေ့ပွဲရဲ့ အမှားများကို ကျနော်မြင်သလိုပဲ သင်ခန်းစာ ယူမိပါလိမ့်မယ်။ နောက်လာမယ့်ပွဲ တွေမှာလည်း စိတ်ဓာတ် ခုိုင်ခုိုင်မာမာနဲ့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင် ရှုံးခြင်း နိုင်ခြင်းဟာ အခရာ ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ U19 အတွက် ဆုတောင်းပေးလုိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲရဲ့ Man of the Match လို့ပြောလို့ရတဲ့ မြန်မာ ဂိုးသမားရဲ့ အင်တာဗျူးပါ။
January 25, 2013 by Thein Htike Aung on Notes
29 March 2015 – New Post you may be interested – Zawgyi font for Lollipop
Finally, I have to setup zawgyi font and keyboard in android phone myself. In my earlier time, my friends’d done that for me. Thanks to them. 😀
Well, the following is the useful link that you can install zawgyi font and keyboard. I’d successfully done in my Samsung Ace 2. I hope it will be ok for you too. Try that.
1) Zawgyi One TTF v2.0
2) Zawgyi-One Flipfont
– Use Zawgyi-One Flipfont if you using galaxy devices. It has 8 font pack Zawgyi-One
It means you can choose font that you want. I like “Myanmar + Iphone” font from this.
Installation instruction — Setting > Display > Font Style > Zawgyi One TTF
Then you still need to install Myanmar Keyboard to type after font installation, choose one of the following as you like … →